2. Kwaye elinye "elibi" (okanye elingalunganga kakhulu) ngamapolisa kunye nabaphandi Uncwadi lwangoku
Kwaye emva kwamapolisa "alungileyo" kunye nabaphandi, kuye kwafika ezona ndizithanda kakhulu: abantu abangalunganga ". Abo banikezele Ukuziphatha gwenxa kwazo zonke iintlobo okanye ukonakala nobubi ngaphandle kokucamngca, kunye nokulungiselela kwangaphambili, ubuqhophololo kunye nobusuku. Ndikhethe nabanye Isithandathu sezizwe ezahlukeneyo, kodwa nganye imnyama. Kwaye zininzi ezinye.
Kubafundi inoveli emnyama leyo sukuma ucinge ngemiba yokuziphatha kwaye aboyiki tacos ezihlala ziphuphuma emilonyeni emdaka yezi zigxeki ezimbi - ewe, zikhona ezinye ezenzayo. Kwaye ku abo banomphefumlo ococekileyo abazisolayo ngokuba banezo zinto zingcolileyo -kukho nezinye-. Kodwa ezo indalo engafezekanga ingundoqo kwaba bantu.
1 IiYankees ezimbini, amaTaliyane amabini, indoda yaseIreland kunye neNorway
1.1 Babelana ngantoni?
2 I-CW Sughrue-uJames Crumley
3 UDenny Malone -UDon Winslow
4 UMarco Tanzi -uRomano De Marco
5 URocco Schiavone - uAntonio Manzini
6 UJack Taylor-uKen Bruen
7 UHarry Hole-Jo Nesbø
IiYankees ezimbini, amaTaliyane amabini, indoda yaseIreland kunye neNorway
Zonke zingaphezulu kokufanelekile Ukungcikivwa, ukohlwaywa nokudelelwa, amasikizi nokwaliwa. Kwilizwe lokwenyani, baya kuba besentolongweni kwaye abanye bohlwaywe ngokusisigxina abanokuphononongwa okanye bagwetywe ngqo isohlwayo senkunzi ukuba siye kwiindawo ezithile zaseYankee. Apha kunokwenzeka ukuba babehamba esitratweni okanye batsala ingubo kwi trullo.
Oyena mntu ukufaneleyo ngokude, ngokuba ungomnye waba uninzi lwamapolisa anobuqhophololo nolwaphulo-mthetho yenziwe mva nje, yi UDennis Malone NguDon Winslow. Kodwa, kwaye kulapho kulapho khona amandla ayo amakhulu okutsala, yeyona nto igoba uninzi lwesahlulo sentliziyo esiziva kanjalo.
Ngokwenyani, bonke babelana ngala magunya, ukuya kwinqanaba elikhulu okanye elincinci: lelo le- zimele okuhle kodwa zibe zibi okanye, ubuncinci, zinikezele kuko, okanye kuloyiko kunye nobuthathaka. Zizinto ezahlukeneyo ezibonakalisa ezona zibolileyo, ezimdaka kwaye ezibuthathaka esinokuthi sonke sibe nazo kwaye sikhuphe ngelinye ixesha kwaye sizibona mihla le kubomi benene. Kwaye kuyaziwa ukuba inyani ihlala igqitha ubuxoki.
Kwaye eyona nto intle malunga naloo mtsalane: ukuba sinako zithethelele ngenxa yezizathu ezifanayo ezingamawaka siyabagweba. Ingakumbi, kude kube siyabathanda kwaye siyabathanda, ubuncinci ngaphakathi kumaphepha encwadi. Kwisitrato ... Ugh, bendihlala ndisitsho. Ukuba iyinyani kwaye ufumanisa ukuba isilwanyana sasendle esinotywala kwaye phantse i-2 yeemitha nguHarry Hole, utshintsha indlela esecaleni.
I-CW Sughrue-uJames Crumley
Kutshanje ndifumene i-CW (Chauncey Wayne) Sughrue on Ukwanga okulungileyo kokugqibela kwaye bendonwabe kakhulu ngayo. Umphandi babucala ababeziqhelanisa nee-70s, isemanzini, igqala laseVietnam, siyamazi kwi-40 yakhe yokuqala, enembonakalo embi kakhulu kunye nobudlelwane obude nobuyingozi naye. utywala neziyobisi.
Kukwanjalo ukubonisa uthando, akathandi ukubhabha kwaye idla ngokungena kuzo zonke izinto ezinokubakho kwimisitho yesiyunguma kunye neebhiya ezininzi. Uhambo alwenzileyo kwesi sihloko sokuqala sokufumana indoda engathembekanga ekhangela i-ex yakhe kunye nenkosikazi yakhe yangoku iba yinkohliso xa imfumene kwaye bayahamba kunye ukuya kufuna intombazana elahlekileyo. Ewe, bobabini kunye neFireball, ikwayinja enxilisayo yomnini wendawo enesihlahla.
Kukwanjalo ibhalwe kuqala, obunye ubuthathaka bam bokubhala, kwaye iyavuka ezihlekisayo kwaye kakhulu ukubola ufumene uSughrue kuluhlu lwam lokubulala olungenakuguqulwa. Usizi lokuba uJames Crumley wayengenalo noluntu, ngaphandle kokulufumana kubagxeki kunye nokuphumelela amabhaso aliqela.
UDenny Malone -UDon Winslow
Urhwaphilizo lwamapolisa es KAKHULU endikhe ndayifunda kwakudala kwaye ngokuqinisekileyo ndifunda kunyaka ophelileyo. A Ingxelo yovuyo yamapolisa akhohlakeleyo nabaphuli-mthetho, ukuthengisa iziyobisi nokugxeka ngokuqatha abona bantu babolileyo sihlala kubo.
Kwaye umlinganiswa ophambili, intle kwaye ingaphaya kokoyikeka kwe-DPNY uSergeant Dennis Malone, waya ngqo eqongeni kwabo bantu bawudla bawugqiba umphefumlo wam ngezivakalisi ezisixhenxe nangesimbo somzimba kwaye bahlala ngonaphakade ngenye into yentliziyo yam yokubhala. Eyona nto imbi kakhulu, eyona inamandla, ukungcatsha kunye nohanahaniso oluphakanyiswe kwinqanaba le-nth. Kwaye u ihlaba amathumbu akho ngemvakalelo kunye noloyiko izahlulo ezilinganayo. Ngamanye amagama, uvuyo.
Inye yezo Ukufundwa okunyanzelekileyo, okunyanzelekileyo kunye nomthetho wommiselo kubo bonke abathandi bohlobo olumnyama kakhulu, oluhlaza kunye nolukhohlakeleyo.
UMarco Tanzi -uRomano De Marco
UTanzi wayengomnye wamapolisa aphambili eMilan de iba mdaka kunezandla kumatyala orhwaphilizo kwaye uphelela entolongweni. Uyasifezekisa isigwebo sakhe, kodwa aphele esitalatweni, njengesibetho kumfazi wakhe, athe wamqhatha kunye neqabane lakhe kunye nomhlobo wakhe osenyongweni, uLuca Betti, kunye nentombi yakhe. Irhamncwa elibi kwaye ke lifuna ukuqhubeka, lilibale. Kodwa xa esiva ukuba intombi yakhe yeshumi elivisayo ilahlekile, irhamncwa liyavuka kwaye ngeli xesha akukho mntu uya kulinqanda.
Ngaphambili, nangona kunjalo, une indlela ende yokukhululwa komntu angayifuni Kwaye akafuni, kodwa ufumana umbulelo kulwazelelelo kunye nemfesane yakhe nguBetti.
URocco Schiavone - uAntonio Manzini
Ngexesha elithile elidlulileyo ndafunda uluvo lomntu owayekhalaza malunga ubungakanani beetacos ezifundwayo kwiinoveli zika-Antonio Manzini, ngakumbi kule yokugqibela, 7-7-2007, kwaye ngakumbi kwicala le usekela-khomishina omkhulu Schiavone, Roman ekuthinjweni ngenkani emapoliseni Aosta. Ngamanye amagama, umntu ufunda iinoveli zolwaphulo-mthetho kwaye eyona nto inokuba sisothuko kukuba uManzini unetacos encinci. Ndandimangalisiwe, kunjalo.
Kwakunomdla ukuba eli hlazo alikho ngenxa ye ukuthanda kakhulu ukudibana ukuba uSchiavone akayeki kusasa. Nokuba ngu Iqela lemigulukudu yoogxa bakho bonke abona badlakadlaka kumakhaya onke, kodwa eyona nto ilungileyo yobuhlobo obungenakuqhekeka nokungathandabuzekiyo.
Kwakungekho ngxwabangxwaba malunga nokuthinjwa / ukohlwaywa kukaSchiavone ovela eRoma awayebazi obona buso bakhe yena ngokwakhe uzonakalisile ukuya kwiinki. Urhwaphilizo oluphantse lwamlahlekisela umtshato wakhe a umfazi abo abathandayo, kodwa ngubani ohlawule kakhulu kwaye ngendlela engaphezulu kobuhlungu.
Nangona kunjalo, kwenzeka ntoni izizathu ezininzi apho uSchiavone anokuphazamisa, kodwa eyokugqibela kukuba ithi ngaphezulu okanye ngaphantsi kweetacos. IkwangumTaliyane, ndoda ...
UJack Taylor-uKen Bruen
Isi-Irish. Yonke into sele ithethiwe malunga nobubi obudala, utywala. Kodwa uhamba nayo yonke into kweli polisa langaphambili elinomlomo omkhulu kakhulu kwaye incasa kakhulu yokuhlutha, lowo ugxothiweyo kwaye uye kuphando lwabucala. Kubi kakhulu ukuba abaziguquli ezinye izihloko zezi noveli zimfutshane, zinomdla, zigcwele uburharha kunye neencoko ezigqibeleleyo. Taylor yeyona antihero imfiliba endazaziyo kudala.
UHarry Hole-Jo Nesbø
Ewe ukuphela ngakumbi. Kwaye, ngentliziyo yam ethobekileyo kodwa enkulu yezilwanyana ezilahlekileyo zokuthotyelwa komthetho, yeyaseNorway UHarry hole. Kodwa Andizukunweba kakhulu ngaphezulu kwesi sidalwa ndithethe ngaso apha naphaya amaxesha ngamaxesha.
Ndiza kugxininisa kuphela endikubhalileyo ngaye kudala: yintoni i ukugqibelela kokungafezeki kuyo yonke. Inkqubo ye- isishwankathelo Uyilo lwenoveli yomlinganiswa ophambili. Uyolo lwe uncoma izinto ezimbi nezona zibalaseleyo ngokufanayo yobume bomntu, kodwa wonwabe nangakumbi ngokuba nakho ukuncoma ubuqhetseba bayo obukhulu.
Kwakhona kukho umntu owayekhalaza Kutshanje ndinqwenela ukuba uHole angabinayo «Obo bungendawo butywala». Kodwa wow Kwaye uHarry Hole angayintoni ngaphandle kotywala? Ukuba ibikukuphela kwempazamo nobuthathaka bayo… Ekugqibeleni, umntu uhlala ebhenela kwii-clichés kwaye athi ngathi kumdlalo bhanyabhanya: «Hayi, ungakholelwa, ngumdlalo bhanyabhanya. Kulungile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » 2. Kwaye elinye "elibi" (okanye elingalunganga kakhulu) ngamapolisa kunye nabaphandi
U-Anne Perry: Ukusuka kumgwebi onetyala ukuya kumbhali wolwaphulo-mthetho.